January 4, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Southampton oo garoonkeeda St. Mary’s guul kaga gaartay kooxda Liverpool… +SAWIRRO
Cayaaraha January 4, 2021
(Southampton) 04 Jan 2021. Southampton ayaa garoonkeeda St. Mary’s guul kaga gaartay kooxda Liverpool, kaddib makii ay kaga adkaatay 1-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineyay kooxda martida loo ahaa ee Southampton. Daqiiqadii 2-aad kooxda Sii akhriso
Soomaaliya January 4, 2021
Riyaad (SONNA)- Waxaaa soo baxaya in guul wax ku ool ah laga gaaray wadaxaajood Maraykanku ku luglahaa oo la doonayey in lagu soo afmeero khilafka wadamada Sucuudigu hogaaminayey kala dhexeeyey Qatar oo ay go’doomin dhinac walba ah ku soo rogeen bartamihii 2017-da, waxaana lagu wadaa in Sucuudiga lagu saxiiso maalinta Talaadada heshiis rasmi ah oo […]Sii akhriso
Haweeney ka tirsan baarlamaanka UK oo la xiray kadib markii ay jabisay sharciyada xayiraada karoonaha
Margaret Ferrier oo ka tirsan baarlamaanka UK gaar ahaan xisbiga ee SNP ee Scotland ayaa la xiray kadib markii lagu helay danbi ah in sharuucda karoonaha ay jabisay. 29 September ayaa la sheegay in ay tareenk kaga safartay London ay aaday Glasgow xarunta Scotland iyada oo qabta feyraska karoona. Boolisku waxay ku eedeeyeen danbi ah […]Sii akhriso
Shaxda rasmiga ah kulanka adage e Kooxaha Southampton iyo Liverpool ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
(Southampton) 04 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Southampton iyo Liverpool horyaalka Premier League ayaa la shaaciyey. Kooxda Southampton ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Liverpool si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka Premier League ee dalka England. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Southampton Sii akhriso
Suxufiga caanka ah ee Fabrizio Romano oo sheegay kooxda uu ku biirayo David Alaba haddii uu ka tago Bayern Munich
(Yurub) 04 Jan 2021. Saxafiga caanka ah ee Fabrizio Romano ayaa tilmaamay in daafaca kooxda Bayern Munich ee David Alaba uu doonayo isla markaana uu ku riyoonayo ka ciyaarista kooxda reer Spain ee Real Madrid. Fabrizio Romano ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay ku dhowdahay inay kula saxiixato daafaca reer Austria ee David […]Sii akhriso
Ethiopia to end $3.6b oil deal with US firm on Quartz Africa probe – Quartz Africa
Ethiopia News January 4, 2021
Ethiopia to end $3.6b oil deal with US firm on Quartz Africa probe Quartz AfricaSii akhriso
Madaxweynaha Galmudug oo safar shaqo ku yimid Muqdisho
MUQDISHO-(SONNA)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (qoor-qoor), iyo wafdi uu hoggaaminaayo ayaa goor dhow safar shaqo ku soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Madaxweynaha iyo wafdigiisa oo ka soo ambabaxay magaalada Garoowe oo maalmihii dambe uu uga qeyb galayay shirkii Madasha Aragti Wadaaga ee Heritage iyo shirar doceedyo dhowr Sii akhriso
Garoonka diyaaradaha Cadan oo dib u shaqo bilaabay
Cadan-(SONNA)-Wasiirka arimaha Gudaha ee dalka Yemen mudane Ibraahim xaydaan ayaa sheegay in maanta oo isniin ah dib loo bilaabayo shaqooyinkii garoonka diyaaradaha Cadan ee dalkaas. Wasiirka oo waraysi siiyay wakaaladda wararka ee dalka Yemen ayaa sheegay in dowladdu go’aan satay in si deg-deg ah loo soo celiyo shaqooyinkii ka socday garoonka diyaaradaha si looga Sii akhriso
Dowladda UK oo safiir cusub u magacowday Soomaaliya
London-(SONNA)-Dowladda UK, ayaa Kate Foster u magacowday safiirkeeda cusub ee Soomaaliya, waxaana ay noqonaysa Safiirka UK, ee fadhiya dalka Soomaaliya. Kate oo heysata abaalmarinta sare ee UK ee lagu magacaabo OBE, ayaa waxaa ay in muddo ah ka soo shaqaynaysay qeybo kala duwan oo kamid ah Xukuumadda UK, gaar ahaan waaxda horumarinta caalamiga ah. Kate […]Sii akhriso
Lionel Messi oo laga waayey Shaxda 11-ka xiddig ee ugu fiicnaa 2020 oo ay ku dhawaaqay L’Equipe & Ramos kaligiis oo ka socda horyaalka La Liga
(Yurub) 04 Jan 2021. Jariiradda ka soo baxda Waddanka Faransiiska ee L’Equipe ayaa ku dhawaaqay shaxda 11-ka ciyaaryahan ee ugu fiicnaa kubadda cagta sanadkii tagay ee 2020. Lionel Messi ayaa boos ka waayey shaxdan, iyadoo laacibka kaliya ee laga soo qaatay horyaalka La Liga uu yahay Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos. Shaxda ayay Jariiradda […]Sii akhriso